Maxaa looga faa’iideysan la’ yahay kheyraadka dhalinyaradeenna?! | Radio Himilo
Home / Macluumaad / Maxaa looga faa’iideysan la’ yahay kheyraadka dhalinyaradeenna?!
Muqdisho – Markii ugu horreysay ee bulshadeennu bilaabayeen la-qabsiga kacaanka magaaloobidda, waxaa jiray wax-yaalo door ahaa oo la xiriiray dhaqashada iyo dhaqanka oo aysan dhicin in loosoo raro nolosha magaalo-nimada.
Is-baddalka loo raadinayo sida ugu maan-galsan ee da’yarteenna looga faa’iideysan karo xoogga iyo aqoonta ay sidaan, kuma dhalanayo maalin kaliya. Waxaa kaliya ee lagu gaaro karo ayaa ah bilaabista mashaariic yaryar oo lagu kaafin karo aas’aaska hoose ee nolosha mujtamaca. Markaaas ayaa si mid ah loogu hammin karaa dejinta mashaariic waaweyn oo jawaabtii loo baahnaa u noqda dhibta iyo rajo xumida qaar ee heysata da’yarta Soomaaliyeed?
Previous: Ozil: “Waxan Wenger weydiistay inuu heshiis ila saxiixdo.”